Sidee Loogu Sameeyaa Cod Cod Youtube? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 582
Barta YouTube-ka waligeed kama daasho soo bandhigida iyo u soo bandhigida waxyaabo cusub mid kasta oo ka mid ah kuwa raacsan. Markan waxay ku dartay ikhtiyaarka ah samee cod raadin hab super fudud oo dhakhso leh. Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato mawduuca, ha ka leexan qodobka soo socda.
Ku sameynta codka raadinta YouTube-ka waa mid ka mid ah shaqooyinkii ugu dambeeyay in YouTube ay ku dartay labadaba barnaamijkeeda moobiilka iyo nooca desktop-ka. Hadda baadhitaan ku sameynta barmaamijkan ayaa aad uga dhakhso badan uguna raaxo badan. Mar dambe uma baahnid inaad wax qorto si aad u hesho nuxurka.
Cod ku raadi shabakadda YouTube
Dhawaan, barnaamijka YouTube-ka ayaa lagu daray suurtagalnimada in la sameeyo raadinta codka iyada oo loo marayo nooca desktop-ka. Isticmaalayaashu waxay heleen casriyeyntaan cusub si togan, uguna wanaagsan dhammaan, adeegsiga muuqaalkan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud ee aan ku sameyn karno gudaha bogga.
Cod ku raadi YouTube-ka wax badan buu fududeeyaa markaad isku dayeyso inaad ka hesho wax ka kooban barnaamijkan. Haddii aad gaari wadid oo aad rabto inaad raadiso fiidiyoow, mar dambe uma baahnid inaad wax qorto, hadda adigoo hadlaya oo keliya ayaad heli kartaa fiidiyaha aad raadineyso.
Halkan waa joogaan qaar ka mid ah tillaabooyinka la raacayo Si aad u sameyso cod raadinta nooca desktop-ka ee YouTube:
Tallaabada 1: Hubi haddii aad haysato ikhtiyaar karti leh
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso hubi haddii doorashadan horeyba looga dhex shaqeeyay koontadaada. In sidaa la yeelo, waa inaad ku soo gasho emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
Markaad ku dhexjirto mashiinka waa inaad ku hagaajisaa aragtidaada barta baaritaanka ee ku taal xagga sare ee shaashadda. Hadaad eegto astaanta makarafoonka Waxay ka dhigan tahay inaad haysato ikhtiyaar ikhtiyaar u ah oo aad ku sameyn karto cod raadin gudaha masraxa.
Tallaabada 2: Samee cod raadin
Ka dib markaan xaqiijino in qalabku karti u leeyahay koontadeena waan awoodnaa sii wad si aad u sameyso raadinta codka gudaha Youtube. Sameynta waa mid aad u fudud oo dhakhso badan.
Kaliya waa nala leeyahay dhagsii astaanta makarafoonka taasi waxay u muuqataa midig dhinaceeda baaritaanka. Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad adeegsanaysid qalabkan, shaashadda oggolaanshaha caadiga ah ayaa soo muuqan doonta. Halkaas waa inaad aqbashaa shuruudaha si aad u horumariso.
Hadda waad bilaabi kartaa isticmaal qalabka raadinta codka dhib la'aan. Riix makarafoonka oo tilmaam waxaad rabto inaad ka dhex raadsato barxadda.
Waa muhiim cod dheer oo cad si Youtube ay ugu guuleysato baaritaanka. Waxaad ka raadin kartaa wax kasta oo aad rabto, xitaa rukhsadahaaga, fiidiyowyada aad jeceshahay ama fiidiyow gaar ah.
Adeegso qalabka ka socda App-ka
Isticmaalayaasha sidoo kale way awoodaan ku samee cod raadinta abka mobilka ka socda YouTube. Sidan ayaad ku sameyn kartaa:
dhagsii dusha sare ee astaanta makarafoonka (oo ku xigta baarka raadinta)
Barnaamijka wuu dhagaysanayaa, markaa u sheeg waxaad rabto inaad ka dhex raadiso barxadda.
Dhawr natiijooyin ayaa soo bixi doona. Xulo xulashada saxda ah waana taas
1 Cod ku raadi shabakadda YouTube
2.1 Tallaabada 1: Hubi haddii aad haysato ikhtiyaar karti leh
2.2 Tallaabada 2: Samee cod raadin
3 Adeegso qalabka ka socda App-ka